Children's Mercy Kansas City - Adeegyada Caalamiga ah ee Daryeelka Caafimaadka Bukaanka
Home > Clinics and Services > International Services > Af Soomaali > Adeegyada Caalamiga ah ee Daryeelka Caafimaadka Bukaanka
Af Soomaali Adeegyada Caalamiga ah ee Daryeelka Caafimaadka Bukaanka
Barnaamijka Bukaanka Caalamiga ah Sannad kasta bukaano badan ayaa u socdaala Cisbitaalka Children's Mercy Hospital ee magaalada Kansas City oo ka yimaad dalal kale si u helaan daryeelka caafimaadka carruurta ee khubaradu isku-raacday, inuu yahay ka ugu heer-sareeya ee adduunka laga helo. Qaar waxay u yimaadaan awooddayada daaweyneed ee heerka asre ee ilmaha, qaar kalena waxay soo raadsadaan adeegayda ay caanka ku yihiin dhakhtaradayadu. Si kasta ha ahaatee, wixii keenaba, bukaan kastaa wuxu helaa daryeel xirfadyahanimo oo aan laga kormari Karin oo ay ku dheehan tahay xushmadda dhaqanada kala duwan ee bulshada caalamka.
Barnaamijka Bukaanka Caalamiga ah wuxu bixiyaa hal meel oo keliya oo ah helitaanka, adeegga iyo iskudubaridka bukaanka caalamiga ah iyo qoysaskooda. Weydiimaha caalamiga ah ee daaweynta dib ayaa loogu fiiriyaa hab qiimayn iyo borotokool kala saarid ah, oo ay ku jirto qiimaynta koox shaqooyin kala duwan qabata. Adeegga gaarka ee socda ee macmiilku wuxu hubiyaa in xidhiidhku meel isugu soo ururo oo baahiyaha macmiilka la buuxiyo.
Aragtida-guud ee CMH
Ilaa 1897, Cisbitaalka Children's Mercy Kansas City ee Magaalada Kansas (CMH) waxyaabaha uu ku soo biiriyey heer-sare ka yeelidda caafimaadka ilmaha waxay hagaajisay nolosha malaayiin carruur ah. Daryeel bukaan oo caaqiibo leh, cilmi-baadhis iyo waxbarasho ayaa ka gargaaray CMH inuu noqdo cisbitaalada caafimaadka carruurta ee ugu sarreeya daryeelka caafimaadka carruurta ee adduunka. Daryeelkan muddada dheer dhaqanka u ahaa Cisbitaalka Children's Mercy Hospital ee Magaalada Kansas wuxuu sii wada inuu wax weyn ku si kordhiyo acafimaadka carruurta adduun ahaan.
Cisbitaalka Children's Mercy Hospital ee Magaalada Kansas, MO. Wuxu ka mid yahay xarumaha caafimaadka carruurta ee ugu sarreeya dalka. Iyada oo ay u aqoonsadeen Xarunta American Nurses Credentialing Center wanaagga sare ee adeegyada kalkaalisanimada, oo ay ku qiimeeyeen 2009 qolada U.S. News & World Report in ay ka mid yihiin "Cisbitaalada Carruurta ee Ugu Wanaagsam Ameerika" 5 takhasus, Cisbitaalka Children's Mercy wuxu bixiyaa daryeel caafimaadka carruurta oo aad u wacan min dhalshada ilaa da'da 18. Iyada oo ka kooban yahay 314-sariirood, Heerka III ee unugga daryeelka adage e dhllaanka-cusub, Heerka I ee xarunta caafimaadka carruurta ba'an, dhakhaatiir dhan 600 oo dhakhtarada carruurta ah, iyo 40 takhasus-hoosaad, wuxu ka mid yahay xarumada caafimaadka carruurta kuwa ugu waaweyn e isku-dhafan ee waddankan. Waxa dheer bayaan hawleedka daryeelka carruurta, Children's Mercy wuxu si firfircoon ugu hawlan yahay daryeelka kiliinigga, cilmi-baadhista caafimaadka carruurta, iyo waxbaritaanka jiilka soo socda ee takhasus-hoosaadyada caafimaadka carruurta.
Waxaan aaminsanahay in carruurta caalamku la siiyo daryeel tayada ugu sarraysa leh, marka khayraadku aan laga heli karin dalkoodii asal ahaaneed. Kuwa ka raadinaya daaweyn Cisbitaalada iyo kiliinigyada Children's Mercy waa inay helaan helitaan wakhtigeed leh qaab rasmi ah oo dib u hubin qiimo leh wata.
Himilooyinkayaga Cisbitaalada iyo Kiliinigyada waa in loo fudaydiyo bukaanka caalamiga ah helitaanka adeegyada jira carruurta raadinaya daryeelka caafimaadka carruurta ee heerka sare ah ee hay'adayada. Waxaan fahamsanahay dhibaatooyinka maaraynta daryeelka caafimaadka ee wadan shisheeye ah; sababtaas awgeed, waxaanu u qoondaynay Isuduwaha Bukaanka Caalamiga ah inuu ka hago bukaanka iyo qoysaskooda habka wax u socdaan. Wuxu isuduwi doonaa baahiyaha iyo weydiimaha la xidhhidha caafimaadka, maaliyadda ama adeegyada u baahan in la xalliyo.
Haddii aad rabto inaad u gudbiso Cisbitaalka The Children's Mercy Kansas City ee Magaalada Kansas bukaan caalami ah, fadlan buuxi foomka gudbinta ee halkan ku lifaaqan.
Macluumaadka dheeraadka fadlan wac, u qor ama iimayl u dir Barnaamijka Bukaanka Caalamiga ah: